Sunday December 05, 2021 - 10:32:37
Mid kamida kooxaha mucaaradka ee ka dagaallama dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay taqadum ballaaran ka sameynayaan dagaalka ka socda wadankaasi.
Kooxda Oromada ee loo yaqaan OLA ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay usii dhowaanayaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, warbixinno laga helay Itoobiya ayaa sheegaya in maalintii sabtida ay mucaaradku horumar dhanka dagaalka ah sameeyeen.
Maleeshiyaadka ciidanka xureynta Oromada ayaa soo bandhigay boqolaal dagaalyahan oo ay sheegeen in ay udiyaarsanyihiin sidii ay uridi lahaayeen nidaamka Abiy Axmed.
Dhinaca kale xukuumadda xabashida Itoobiya ayaa iclaamisay in laxiray dhammaan dugsiyada sare ee wadanka sababa laxiriira dagaalka lagula jiro jabhadda tigreega ee TPLF.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Addis ayaa lagu sheegay in laxiray dhammaan iskuullada lana fasaxay malaayiin arday ah.
sababta loo xirayo iskuullada ayay dowladdu ku sheegtay xoojinta dagaalka lagula jiro fallaagada.
wasiirka waxbarashada ayaa usheegay warbaahinta afka dowladda ku hadasha in ardayda dhigta dugsiyada sare fursad loosiiyay sidii ay gacan ugeysan lahaayeen guridda dalagyada beeraha kasoo go'aya sababa laxiriira dadkii beeraha ka shaqeynayay oo loo daabulay jiidda dagaalka.
Boqolaal kun oo ruux beeralay ah badankoodna kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada ayaa ku biiray melleteriga Itoobiya ee dagaalka kula jira jabhadda Tigreega.
wasaaradda waxbarashada dowladda xabashida waxay sheegaysaa in inkabadan 2 malyuun oo arday ay isaga tageen waxbarashada tan iyo markii uu bilaawday dagaalka sokeeye ee wadankaas ka holcaya.
gelinkii dambe ee maalintii jimcaha ayuu Abiy axmed iclaamiyay in ay falaagada ka qabsadeen dhowr magaalooyin oo katirsan gobolka Amhara ayna geli doonaan deegaanno ay kamid yihiin Baati iyo koombaloosha.
Dowladda Mareykanka ayaa iyana markale soo cusboonaysiisay digniinihii ay udiraysay muwaadiniinteeda Itoobiya ku sugan, wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa sheegtay in aysan jirin sabab ay dadka american-ka ah usii joogaan Itoobiya waxayna ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wadankaas ugasoo baxaan.
Mareykanka ayaa cabsi qaba in wax lamid ah wixii ka dhacay Madaarka Kaabuul ay lakulmaan muwaadiniintiisa Itoobiya ku sugan.
Saldhigga ciidanka Itoobiya ee Waajid oo 13 madfac lagu weeraray iyo sarkaal lagu dilay Buurhakaba.